Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Na -agagharị na ihe nketa Seychelles
Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Seychelles
Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Seychelles na -ebufe ndị ọbịa afọ 250 gara aga na -enye ha ụtọ nke ihe nketa Creole nke agwaetiti ahụ.
National Museum of History bụ ihe juputara na njiri mara nke ndị ọchịchị, ihe nka, na veranda.
Ebe a na -ese ihe na -egosi omenala Creole, na -eji ọmarịcha nka mara mma - site na egwu na ịgba egwu, ruo n'ihe egwu na nka, ruo na nri na -atọ ụtọ.
Ncheta ndị emepụtara n'oge nyocha ihe ngosi nka nwere ike iburu n'ụlọ dị ka ihe ncheta n'ụdị nwa bebi ọdịnala, akwụkwọ akụkọ ọdịnala, akpa, ihe okike, na ihe ndị ọzọ.
Mmadụ ekpughepụtaghị ịma mma nke agwaetiti Seychelles ruo mgbe mmadụ nyochara mgbọrọgwụ nke agwaetiti ahụ. N'ịbụ nke dị na isi obodo Victoria, isi obodo ebe ọ na -aga, wee pụọ na ụlọ nche ama ama, National Museum of History na -akwado ọtụtụ veranda nke na -akọ akụkọ gara aga site na arịa na ihe onyonyo pụrụ iche.
Otu mpempe akụkọ
National Museum of History na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa nke oge gara aga, ọ bụghị naanị site na ọdịnaya ya kamakwa maka ụdị ejiji nke ọchịchị ya nke na-egosipụta usoro ọdịnala nke Seychelles. Ọ bụ New Oriental Bank wuru ya maka ojiji ha, ebe ngosi nka mepere ụzọ ya na 1965 ma nọrọ ugbu a na ebe bụbu ụlọ ikpe kacha elu nke Seychelles, mgbe ọ hapụsịrị ebe ọ bụ ọfịs Mayor nke Victoria na 1990.
Ị nabata gị n'ọnụ ụzọ ebe ngosi nka bụ ihe ekwenyere na ọ bụ obere ihe oyiyi nke Queen Victoria n'ụwa n'ime obere isi obodo akpọrọ aha ya na Queen Victoria Jubilee Fountain nke e kpughere, n'oge ndụ eze ogologo oge, na 5 Jenụwarị 1900 site n'aka Lady Mary Jane Sweet-Escott, nwunye onye nchịkwa na onye ọchịchị Britain mbụ na Seychelles, Sir Ernest Bickham Sweet-Escott. Nzọụkwụ ole na ole dịpụrụ adịpụ bụ nkwụsị nke Pierre Poivre, onye nchịkwa ebumnuche nke Isle de France na Ile Bourbon na-ahụ maka iwebata pawuda na ngwa nri n'agwaetiti ndị ahụ site na nguzobe nke Jardin du Roi, mkpali n'azụ ubi nke ugbu a. na Enfoncement, Anse Royale.
N'ịbụ onye e mere iji gosipụta akụkọ ihe mere eme nke Seychelles na nnweta, ichekwa na ngosipụta ihe ndị mere eme nke mmasị ọdịbendị na -egosipụta ọdịnala na ụdị ndụ n'oge gara aga, emezigharịrị ebe ngosi nka na 2018 ịgụnye ngosipụta dijitalụ na ihe ndị ọzọ na veranda na -ekpuchi akụkụ sara mbara. nke akụkọ Seychelles gụnyere akụ na ụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe omume na ọdịbendị.
Obi ụlọ Seychelles
N'ịbụ onye a ma ama maka nri ha na -atọ ụtọ, ndị Seychelles nwere ngwa ọrụ na -enyere ha aka n'itinye ngwa nri na -esi ísì ụtọ na ihe ọhụrụ. Laa azụ n'oge ahụ, kichin bụ ụlọ dị iche site na nnukwu ụlọ, nke ewuru karịsịa iji gbochie ọkụ ụlọ. A na -ahụkarị ngwa kichin Creole kichin dị ka ngwa agha na pestle, iko enamel na efere, grasa casta na 'marmit', ite esi nri nke a na -achọta n'ụlọ ọ bụla. Akụkụ dị oke mkpa nke ezinụlọ Creole, ihe ngosi kichin nke ebe ngosi nka nwere arịa ndị a ka na -eji na kichin ọgbara ọhụrụ gburugburu Seychelles.
Akụkọ banyere oke osimiri
Ihe osise nke ndị ọkụ azụ na mpaghara na pirogue ọdịnala ha, obere ụgbọ mmiri ịkụ azụ, na -ebuga gị ụbọchị ndị ọkụ azụ ga -ebido n'ụtụtụ maka azụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma, yana n'isi ụtụtụ, ị nwere ike ịhụ usoro ọdịnala a ka ị na -aga n'ụtụtụ n'ụsọ osimiri dịka Beau Vallon. Na ngosi, ị nwere ike ịchọta ọnyà azụ achara ejiri aka mee nke a maara dị kazye na ọbụna lansiv, shei conch, nke ndị ọkụ azụ na -eji arata ndị Seychelles n'ụlọ ha n'ikpere mmiri ma ọ bụ n'ahịa iji zụta azụ ọhụrụ nke ụbọchị, emume a ka dị ndụ ruo taa.
Ọgwụ nke okike bụ akụkụ nke ihe nketa nke Seychelles. N'ịbụ ndị mba nta agwaetiti, ndị mmadụ ji ihe ha nwere ike nweta nke ọma yana nke a gụnyere ọgwụ. Ejiri ọtụtụ ihe dị ndụ dị iche iche gọzie ya, ọgwụgwọ ahịhịa nke ị nwere ike ịhụ na ngosi, ka ejiri gwọọ ụdị ọrịa niile. Site na tisanes maka ọtụtụ ọrịa na ahụ mgbu, balms na -ajụ oyi maka ọkụ, ruo tonics ma ọ bụ 'rafresisan' nke a kwadebere site na akwụkwọ na mgbọrọgwụ osisi, a na -eji ọtụtụ ọgwụ ndị a eme ihe taa ma bụrụkwa ndị sayensị gosipụtara na ọ bara uru maka ahụike mmadụ. Ịnwere ike ịhụ ụfọdụ n'ime osisi ndị a ka ị na -enyocha ụfọdụ ụzọ agwaetiti dị iche iche.
Nka nka Creole
Omenala Creole na -eji nka nwere ọmarịcha egwu - site na egwu na ịgba egwu ruo n'ihe egwu na nka. A na -egosipụta mmalite nka ndị Seychelles site na arịa dị iche iche dịka ihe ọkpụkpụ na ngwa egwu ọdịnala gụnyere mkpọtụ mkpọtụ na ngwa ndị ọzọ emere. na Seychelles. Ị nwekwara ike ịchọta onyonyo na nka ndị ọzọ, nke ọtụtụ n'ime ha, dịka akpa rafia na okpu, abụrụla ihe ncheta a ma ama.
Ibi ndụ dị ka Seychelles
E nwere ike ịhụ ụdị ejiji Seychelles maka oge dị iche iche na ụdị edozi isi ụmụ nwanyị na -eyi n'oge ahụ n'otu n'ime ebe ngosi nka. Ị nwedịrị ike chọpụta ụfọdụ egwuregwu ọdịnala, nke ụfọdụ n'ime ha gafere ma na -adị ndụ n'ime ọha mmadụ taa. Ka ị na -enyocha ụfọdụ arịa ndị a, ị ga -achọpụta etu ọnụnọ Africa, Eshia na Europe siri metụta omenala Creole.
Ịkọ akụkọ ihe mere eme nke Seychelles
Ọ nweghị ụzọ ka mma ị ga -esi cheta njem gị site na ụlọ nzukọ nke akụkọ ihe mere eme karịa ịla n'ụlọ obere ihe ncheta. Mgbe njem gị kwụsịrị site na ụlọ ahịa ihe ngosi nka nke nwere ọtụtụ onyinye maka ndị nọ n'afọ ndụ niile. Maka ndị na -eto eto, họrọ obere nwa bebi ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ọdịnala maka akụkọ ụra ka ha na -abanye na ala nrọ. Ị nwere ike ịchọta ọrụ aka obodo sitere na akpa ruo ihe okike e ji osisi rụọ, ị nwekwara ike iburu obere ụlọ! Ị ga -ahụrịrị ihe maka onwe gị na ndị ị hụrụ n'anya niile!